DHEGEYSO-Siyaasi Cabdi Cali Tooxow oo ka faaloonaya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo shirarka doorashada. – Radio Daljir
Janaayo 26, 2016 4:34 b 0
Muqdisho, 26, Jan, 2016- Shalay galinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirkii madashada wadatashiga ee madaxda Soomaalida oo iskugu jira kuwa dawladda federaalka iyo madaxda kale ee dawladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya.
Shirkaas oo ah wajigii afaraad ee madaxda Somalida iskugu timaado lana xirira madasha wadatasha ayaa inta badan aan lagu meelayn guulo la taaban karo iyo qodobo wax-ku-ool ah marka laga hadlayo higsiga arrimaha doorashada.
Shirkii kan ka horeeyey ee Kismaayo waa lagu kala dareeray si natiijo la’aan ah kadib markii la isku mariwaayey qodobadii gundhigga u ahaa shirka ee qaabka xulidda aqallada baarlamaank
Haddaba shir haatan ee Muqdisho oo laftigiisa duba laga dareemay kala tagganaan madaxda Soomaalida ah maxaa laga fili karaa? maxaase la gudboon madaxda Soomaalida ee shirkaasi ka qaybgalaya si loo gaaro halka hayaanka lagu yahay? su’aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan wyadiinnay Cabdi Cali Tooxow oo bartay cilmiga hormarinta bulsh, kana faallooda arrimaha siyaasadda.